BUDDHIST TERMS' Dictionary: MORALITY - သီလ
MORALITY - သီလ
သီလ - ကိုယ်မှု နှုတ်မှုများကို စောင့်ထိန်းခြင်း။
ကိုယ်မှု (ကာယကံ)၊ နှုတ်မှု (၀စီကံ) တို့ကို မကျူးလွန်အောင် စောင့်ထိန်းခြင်း စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် သီလ မည်၏။
Moral conduct; restraint in physical and verbal actions
Morality denotes being virtuous and abstaining from evil actions both physical and verbal. It also prescribes virtuous conduct (cᾱritta sῑla).
See also PRECEPTS; MERITORIOUS DEED.